Gaadhigii ugu horeeyey ee Hargeysa isaga oo furfuran la keenay i waa Izuzu-ga
Gaadhi Hargeysa lagu Xidh-xidho waxa ugu Horeeyey: Isuzu
Waxa ay ahayd 1960-meedyadii, markii uu Xaaji Cabdillaahi Sheekh Ibraahim (Abu-site), uu gaadhiga Isuzu-ga ah, oo kala furfuran, oo gobol-gobol u saxaaradaysan, oo qidcad-qidcad u bacaysan, uu Jabbaan ka soo waaridi jirey i.
Waxa ay ahayd 1960-meedyadii, markii warshadda ama geerashka Abu-site, ee reer Hargeysa ama reer Somaliland oo idil i ay wada yaqaannaan, baabuurka Izuzu-ga ah, oo kala dhig-dhigan lagu dhex farsamayn jirey, oo lagu dhex rakibi jirey i.
Waxa ay ahayd 1960-meedyadii, markii ay farsamayaqaanno iyo hawl-wadeenno tababaran, oo xirfad leh, oo aqoon leh i, ay gaadhiga oo dhammaystiran, oo ay soo jitaabiyeen, oo ay kaga soo dananiyeen, ay macmiilkii dalbaday ku wareejin jireen i.
Warshadayntu, haddeer inoo kow ma ahan, oo horay ayay Hargeysa uga bilaabantay, oo ay uga hir-gashay. Waxa suurta-galiyey, nin hibo-ganacsiyeed lahaa, oo aqoon ifeed iyo mid aakhireedba lahaa – waa Xaaji Cabdillaahi Abusite e – oo Somaliland, gaar ahaan Hargeysa ka aasaasay.
Warshad qalabaysan, oo casriyeysan, oo qaab-dhismeedku uu u dhan yahay, oo u kala qaybsan: Injiinnada – batrool iyo naafto -, ranjiga, alxanka, korontada, toornada, xidh-xidhka baabuurta cusub iyo (spare parts), ayuu dhidibada u taagey. Maamul iyo farsamayaqaanno carbisan, oo khubarada Izuzu-gu ay wax soo bareenna, wuu ka hawl-galiyey. Alla-na – isaga ayaa mahadda leh e - wuu ku guuleeyey.
Waa waagii bulshaduna ay ku luuqayn jirtey:
Samada loogu sahan tagey.